#LAND - Koorso Madaniga ah 3D oo loogu talagalay shaqooyinka madaniga - Heerka 3 - Geofumadas
Meelaynta horumarsan, sagxadaha, qaybaha isgoyska. Baro sida loo abuuro naqshadaha toosan ee aasaasiga ah iyo ula shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Sahanka iyo Howlaha Bulshada
Tani waa saddexaad of set ah Koorsooyinka 4 loo yaqaan 'Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Rayidka' kaas oo kuu oggolaanaya inaad baratid sida loo maareeyo barnaamijkan aadka u fiican ee 'Autodesk' oo loo adeegsado mashaariic kala duwan iyo goobo dhisme. Noqo khabiir ku ah softiweerka waxaadna abuuri kartaa dhismeyaal dunid, xisaabin kara qalabka iyo qiimaha dhismaha waxaadna abuuri kartaa naqshado waaweyn oo jidad, buundooyin, bullaacado iyo kuwa kale.
QODOBKA MAXKAMADA DHEXE (3 / 4)
- Daabacaadda dusha sare, is dhexgalka, hagaajinta, dhoofinta.
- Qaababka moodooyinka dusha sare, soojeedinta, falanqaynta maabka.
- Moodel dul-saar ah.
- Cubing, warbixinnada mugga u dhexeeya dusha sare.
XEERARKA HORIZONTAL II
- Maareynta qaabka sare
- Tifatirashada iyo dhismaha qaabaynta qaabeynta iyo miisaska.
- Sawir ahaan, joomatari iyo daabacaad tabular (horumarsan).
- Faasas barbarro ah iyo ballac ballaaran.
Qeexida iyo jaantusyada cant.
TILMAAMAHA GUUD II
- Dhismeyaal leh miisasyo naqshadeed.
- Daawashada astaan ​​guud
- Saadaasha shay ka soo baxa geedka ilaa muuqaalka.
- Maareynta horumarsan ee qaababka, xargaha.
Qeybta Labaad II
- Qeexida isu imaatinka (qaab dhismeedka). Hormarsan.
- Abuurista iyo qaabeynta gole hoosaadyada, koodhyada iyo xiriiriyeyaasha.
- Qeexitaanka wareejinta tooska ah iyo toosan
LINEAR SHAQAAL II
- Saf toosan oo leh dhowr jahooyin.
- Khadka toosan la shaqeeya gobollada iyo qaabab kala duwan.
- Daabacaad horumarsan ee shaqada toosan, qaybaha, inta jeer, gobollada, sagxadaha.
QAYBAHA CROSS II
- Maareynta horumarsan ee qaababka, miisaska, waxyaabaha la soo bandhigo.
- Tafatirka xariiqda muunad qaadista.
- Qaabeynta horumarsan ee qalabka iyo qiimayaasha.
Jaantusyada guud iyo warbixinnada.
Post Previous«Previous #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 4
Post Next #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 2Next »